* Light Of Myanmar *: April 2008
သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်းမှ ကင်းရှင်းပါစေ
ဒီမိုသတင်းဌာနတွေဟာ Brainwash လုပ်နေပါတယ်လို့ နာမည်ကြီးနေချိန်မှာတော့ သံဃာတွေဟာ သတင်းဌာနတွေကို မျက်ကန်းယုံကြည်နေပါတယ်
တချိန်တုံးက ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိတာမို့ ထောက်ခံရမယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေက မဲဆွယ်ခဲ့ကျပါတယ်။ အခုတော့ ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေမှာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မပြောတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုချက်တွေဟာ အရင်လို နအဖကိုပဲ အရေမရ အဖတ်မရ အတင်းပြောနေတာ မဟုတ်ပဲ သူတို့လုပ်ကိုင်ပုံတွေကို မေးခွန်းထုတ်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မူကပြောင်းလာပါပြီ။ သူတို့ကို မေးခွန်းထုတ်တဲ့သူတွေကို ဘန်းပါတယ်။ သူတို့အမြင်ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာတွေကို သူတို့ ဘလော့မှာ မတင်ပေးတော့ပါဘူး။ သူတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်သူတွေရဲ့ ဘလော့တွေကို Link လုပ်မပေးကျပါဘူး။ အခုနောက်ဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ နအဖက တိုင်းပြည်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာ ကြောင့်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ တောင်းသင့်တယ်ဆိုပဲ။
ဒီမိုကရေစီသမားတွေ အားကျိုးမာန်တက် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့နေတာ အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲသထက် ဆင်းရဲအောင် လုပ်ပြီး နအဖ အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက် ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ လက်ညိုးထိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မြင်တွေ့နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနိဌာရုံတွေဟာ နိုင်ငံရေး နှစ်ဖက်ပြိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပြောလို့လည်း နအဖဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် အုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ မဆုံးဖြတ်စေချင်ပါ။ စစ်ဗိုလ်လူတန်းစားတွေကိုပဲ ရာထူး အခွင့်အရေးတွေပေးနေတဲ့ နအဖကို ထောက်ခံဖို့စည်ုးရုံးတယ်လဲ မထင်ပါနဲ့။ ပြည်သူတွေဆီကနေ အခွန်တွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးမြှင့်ကောက်ခံနေတဲ့ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံချင်စိတ်ဝင်လာရင် မှားသွားပါမယ်။ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံနဲ့ တံတားတွေဆောက်ပြီး ပြည်သူအသုံးပြုဖို့ကျတော့ ပိုက်ဆံကောက်နေတဲ့ ဦးသန်းရွှေလုပ်ရပ်ကို သင်ဟာ ထောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကျပ်မပြည့်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာ ဘယ်လောက် ရင်နာဖို့ကောင်းလဲ? နအဖ နံပါတ်(၁) တရားခံလို့ ယူဆပါတယ်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားသည် ဖြစ်ပါစေ ပြည်သူတွေ အခုလောက်အထိ အခြေအနေ မဆိုးသင့်ပါဘူးဗျာ။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေမှာလည်း တာဝန် အများကြီးရှိပါတယ်။ (ပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့ ပြည်သူ့တာဝန်ကျေဖို့ထက် နှစ်လုံးထီထိုးပြီး လဒ်စားကြီးပွားသူတွေ၊ ဘိန်းသမားတွေကို မြေတောင်မြှောက် ပေးနေတာတွေ လုပ်နေပါတယ်။) ရွံဖို့ကောင်းတာ တစ်ခုကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးအလောင်းတွေပြပြီး ဒီမိုကရေစီ သမားတွေ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မသာလောင်းနဲ့ အကျိုးအမြတ်ရအောင် လုပ်တယ်ဆိုတော့ တကယ်စင်စစ် နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အကြီးစား သုဘရာဇာတွေပဲဗျ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးမှာ မပါဖို့ တားမြစ်ခြင်ပါတယ်။
ဒီမိုသံဃာတွေ၊ နအဖသံဃာတွေ မရှိသင့်ပါ
သံဃာတွေကိုအားလုံး နိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝ မပတ်သက်ပါနဲ့လို့ တင်လျှောက်လိုပါတယ်ဘုရား။ နအဖ ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီမိုကရေစီဘက်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် မထောက်ခံပါနဲ့။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် လူဝတ်လဲပါ။ လူဝတ်လဲပြီးရင် လူတွေလို ပြုမှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒါကာတွေ ချွေးနဲစာနဲ့ ကပ်နေတဲ့ ဆွမ်းကို လိမ်ညာစားနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ သံဃာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သီရိလင်္ကာဘုန်းကြီးပါတီထောင်တာကို အားမကျပါနဲ့။ တကယ်အတုယူရမှာက နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီးကို မဟုတ်ဘူး။ ရဟန္တာမထေကြီးတွေဖြစ်တဲ့ မိုးကုတ်ဆရာတော်နဲ့ လယ်တီဆရာတော်ကြီးတို့ကို စံနမူနာယူသင့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သာမညတောင် ဆရာတော်ကြီးလို မေတ္တာတရားကြီးတဲ့ ဆရာတော်ကြီးကိုလဲ အတုယူလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အောက်တန်းစားတွေ ဖက်ခွက်စားတွေ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ သံဃာတွောတွေဟာ မြင့်မြတ်လွန်းပါတယ်။ သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာ မစင်တွင်းထဲ ခုန်ချသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတာ တချို့ဘုန်းကြီးတွေဟာ နအဖ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတာတွေမှာ သာယာနေပြီး နအဖ လုပ်ရပ်တွေကို ချီးကျူး၊ ချီးမွမ်းတွေ လုပ်နေပါတယ်။ အဲဒါတွေ မဖြစ်သင့်ပါ။ (မိမိ သံဃာတွေကို ဆန္ဒပြမထွက်ဖို့တားမြစ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ လုပ်ရပ်ကတော့ နအဖ ထောက်ခံတယ်လို့ မသတ်မှတ်ပါ။ မလုပ်သင့်တာကို တားမြစ်တာမို့ သာသနာကို စောင့်ရှောက်နေသည့် ဆရာတော်ကြီးများအဖြစ် မြင်သင့်ပါတယ်) နအဖသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အစိုးရတွေလို ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ မရက်စက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်အခွန်တွေ တိုးကောက်၊ ပြည်သူတွေကြပ်တည်း နေတာကို တစက်လေးမှ ဂရုမစိုက်ပဲ လျစ်လျူရှုနေတာ အစိုးရကောင်း တစ်ခုရဲ့အပြုအမူမဟုတ်ပါ။ အရေးမပါတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုံကို ငတ်ပြတ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေပိုက်ဆံနဲ့ ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ မုံန်းဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ တခြားအစိုးရတွေရဲ့ အခွန်ကောက်နည်းတွေကို လေ့လာတယ် လိုက်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားအစိုးရတွေ ပြည်သူတွေအတွက် သက်သာချောင်ချိရေး လုပ်တာတွေကျတော့ အတုမခိုးတော့ဘူးဗျာ။ နအဖဟာ မင်းဆိုးမင်းညစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နအဖကို သံဃာတွေ မထောက်ခံသင့်ပါဘူး။
ဒီမိုဘုံန်းဘုန်းတွေလဲ အလိမ်ခံထားရတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်က နိုင်ငံရေးဆိုတာ နေ့စဉ်တဒူဝ ကိစ္စလည်းနိုင်ငံရေးပဲ၊ ကားစီး၊ ဈေးဝယ်တာက အစ နိုင်ငံရေးဆိုပြီး ပြောဆိုတာမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေလို့ ရောပြီးပြောနေတဲ့ကိစ္စဟာ လိုရာဆွဲပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပြောကျစတမ်းဆိုရင် အားကစားသမားကလဲ အဲလိုပဲ ဆွဲပြီးပြောလို့ ရပါတယ်။ ထမင်းစား၊ ရေသောက်တာက အစ အားကစားနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး နဲ့ နအဖ အဏာတည်မြဲရေးအတွက် လုပ်ပေးတာကိုပဲ နိုင်ငံရေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးဆွဲဆန့်လို့ မရပါဘူး။ အခုဒီမိုဘုံန်းဘုံန်းတွေဟာ ဘာသာရေးအတွက်လိုလို၊ ပြည်သူအတွက်လိုလိုနဲ့ ဘာအတွက်မှန်းမသိပဲ လုပ်နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲလို့ ဘုန်းဘုန်းတွေ မသိပါဘူး။ သူတို့က BBC, DVB, RFA, CNN, FOX တို့က ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ထားတဲ့ သတင်းတွေက အကြောင်းအရာတွေကို တကယ်ထင်ပြီး စာတွေလျှောက်ရေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုံန်းကြီးတွေဟာ စေတနာမှန်ပေမယ့် လုပ်ရပ်ဟာလုံးဝ မှားနေပါတယ်။ သာသနာကိုလဲ ထိခိုက်စေပါတယ်။ သာသာနာပျက်စေမယ့် လုပ်ရပ်ဖို့ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်းကို ချက်ချင်းရပ်သင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာ စက်တင်ဘာအရေးအခင်း ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဘုံန်းကြီးတွေကို ရိုက်နှက်တဲ့ အကြောင်းပါ။ အားမနာတမ်းပြောပါမယ်။ နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာပါ။ ဘုန်းကြီးဟာ လူတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေလို့ ရဲတွေက လူတွေလို သဘောထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူတွေကို ရိုက်သလို ဘုန်းကြီး တွေကိုလဲ ရိုက် ပါတယ်။ ရိုက်နှက်တဲ့ ရဲတွေမှာ အပြစ်မရှိပါ။ ရိုက်နှက်တဲ့ နအဖမှာလဲ အပြစ်မရှိပါ။ နအဖဟာ သူ့အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ သူတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရမှာ ဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ အပြုအမူမှားလို့ အခုလိုဖြစ်ရတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ လူတွေလို အရိုက်မခံချင်ရင် လူတွေလို မလုပ်နဲ့ပေါ့။
ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခကို မကြည့်ရက်လို့ ဆန္ဒပြတာမျိုးကို အပြစ်မတင်ထိုက်ပါဘူး။ မေတ္တာနဲ့ စေတနာပေါ်မှာ အရင်းခံပြီး ပြုမူချက်ဖြစ်နေလို့ပါ။ တကယ်လို့ ဘုံန်းကြီးတွေသာ နိုင်ငံရေးနဲ့ မဟုတ်ပဲ လူထုအကျိုးအတွက်ပဲ လုပ်ခဲ့တာဆိုရင် ဒေါ်ကော်ပီစုကြည် အိမ်ဘက် ချီတက်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားမနာတမ်းပြောရရင် ရဲတွေ သင်္ကန်းအားနာပြီး ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုတာ ထင်မြင်ထားလို့ အခွင့်အရေးယူခဲ့တဲ့ သဘောမျိုး လည်းပါနေတယ်။ ရဲတွေဟာ ဘုန်းကြီးတွေကို လူစုခွဲဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးတွေဟာ“ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ ငါတို့ အခွင့်အရေး၊ ငါတို့ကို ဘာမှလာမပြောနဲ့ ၊ မင်းတို့အလုပ် ငါတို့ ဂရုမစိုက်ဘူး” ဆိုတဲ့ အပြုအမူဆန်ဆန်နဲ့ လူစုခွဲဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကျပါတယ်။ နောက်ဆုံးမတတ်သာတော့မှ လုံထိမ်းတွေက လူစုခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျတော့ ဘုံန်းကြီးကို လုံထိမ်းရိုက်တယ်ဖြစ်ပါလေရာ။ ဒီတော့ အရိုက်ခံရတဲ့ဘုန်းကြီးရော၊ ရိုက်တဲ့ လုံထိမ်းရော နှစဖက်စလုံး သိက္ခာတွေကျ၊ ငရဲတွေရကုန်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် “အေးကွယ်၊ သူတို့တွေမှာ အမိန့်အရ လုပ်ကိုင်ဖို့ တာဝန်ရှိတာပဲ သူတို့တွေကို ငရဲမပေးသင့်ပါဘူးလေ” ဆိုပြီး လူစုအသာတကြည်ခွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်မှာ ဘုန်းကြီးတွေဟာ မိမိတို့ တဖက်တည်းသာ ကြည့်ပြီးလုပ်ပုံတဲ့အတွက် လုံးဝ ပြစ်တင်ရှုံ့ချပါတယ်။ ဘုံန်းကြီးတွေအနေမမှန်လို့ အခုလိုဖြစ်ရတာမို့ နောင်မှာ အခုလိုအမှားမျိုး ထပ်မဖြစ်ရအောင် ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေသင့်ပါတယ်။ (ဘုံန်းကြီးကျောင်းဝင်စီးတဲ့ကိစ္စ ၊ ဘုံန်းကြီးအလောင်းဗီဒီယိုအတု တွေကို ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။)
ဒီမိုသတင်းမီဒီယာတွေဟာ Brainwash လုပ်လို့သာ အားလုံးကောင်းနေတယ်လို့ ထင်နေတာဖြစ်ပါတယ်
လူတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ သံဃာတွေရှိနေခြင်းရဲ့ တန်ဖို့းကို မသိကျပါဘူး။ တချို့ဆိုရင် သံဃာတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးသဖွယ် ပြောဆိုနေကျပါတယ်။ အဲဒီစကားဟာ အတွေးအခေါ်နည်းသူတွေရဲ့ စကားသာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတွေနားထောင်ရင် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာပဲ စုတ်ပြတ်သတ်နေတယ်လို့ ထင်လို့ရပါတယ်။ DVB သတင်းမှာ မြန်မာပြည် ကွမ်းယာဆိုင်မှာ ဆေးခြောက်တွေဝယ်လို့ရတဲ့အကြောင်း ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြောနေပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါမှာတော့ ကွမ်းယာဆိုင်တောင် သွားစရာ မလိုဘူး။ လမ်းဘေးမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။ Toronto မြို့မှာ ပျမ်းမျှ တစ်လ တစ်ကြိမ်နည်းပါး သေနတ်နဲ့ ပြစ်သတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ (ဒီမှာ သေနတ်ကိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး)ကနေဒါဆိုတာ သန်း၃၀ ပဲလူဦးရေရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အင်းယားလမ်းသတ်ဖြတ်တာကို အထူးတဆန်း သတင်းဖြစ်နေပါတယ်။ နအဖ ဆန္ဒပြသူတွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့အကြောင်း သတင်းတွေမှာ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောနေကျပါတယ်။ ဒီဘက်မှာ 9/11 သတ်ဖြတ်မှုကို သတင်းတွေမှာ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခွင့် မရပါ။ လူအခွင့်အရေး ကြော်ငြာစာတမ်းတွေလဲ မတွေ့ရပါ။ ဒါဆိုရင် သတင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရိပ်မိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါက လူတွေဟာ စိတ်ရောဂါမျိုးမျိုးခံစားနေရပါတယ်။ အမေရိကန်မှာဆိုရင် စိတ်ရောဂါဟာ တခြားရောဂါတွေထက် ပိုမိုများပြားနေပါတယ်။ အဖြူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ၀တ်ကောင်း စားကောင်းတွေ ၀တ်ပြီးလူတွေ့ရင် ပြုံးနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ သောကတွေ အပြည့်နဲ့ပါ။ ( အဖြူတွေကို အထင်သေးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ အခက်အခဲကို တင်ပြတဲ့သဘောပါ။ ဒီနေ့ ၀ိပဿနာ ရေပန်းစားလာတာ အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်) ဒါကြောင့် စိတ်ဆရာဝန်တွေဟာ ၀င်ငွေအမြင့်ဆုံးထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ လူတွေဟာ စိတ်မချမ်းသာမှုတွေ၊ သောကတွေများလွန်းလို့ စိတ်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့။ ဆေးတွေစားနဲ့ အသက်ရှင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဆရာဝန်တွေဟာ အနည်းဆုံးတစ်ခါပြရင် ဒေါ်လာ နှစ်ရာ ကနေ နှစ်ထောင်အထိ ပေးရပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတွေဟာ အဲလောက် သောကမများပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တရားဓမ္မရှိနေလို့ပါ။ တရားဓမ္မဟာ သောကမီးတွေကို ကုစားရာမှာ ဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တရားဓမ္မတွေရှိနေတာ သာသနာစောင့်ရှောက်တဲ့ သဃာံများကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သံဃာတွေ မရှိခဲ့ရင် တရားဓမ္မလည်းရှိမည် မဟုတ်ပါ။ တရားမရှိရင် လူတွေဟာ လောကဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိပဲ သောကတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါမည်။ သောကပြည့်နှက်နေတဲ့သူတွေဟာ သူတပါးရဲ့ အသက်အန္တရယ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်သလို မိမိကိုယ်ကိုလည်း သေကြောင်းကြံနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို စီးပွားရေး ဆိုးရွားနေတဲ့အခြေအနေမှာ သံဃာတွေ မရှိပါက မတွေးဝံ့စရာပါ။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီး အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာလည်းဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် သံဃာတော်တွေကို မစော်ကားပါနဲ့။ သံဃာကယ်တင်လို့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အခုလောက်အခြေအနေ ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်။ ဘုရား၊ တရား ၊ သံဃာသည် တန်းတူသာဖြစ်ပါသည်။ သံဃာတော် အပေါင်းကို ရိုသေရှိခိုးလိုက်ပါသည် ဘုရား။
Posted by * In Search of Truth * at 9:45 PM5comments Links to this post
တိုင်းပြည်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သူတို့လား?
နအဖသည် ကုန်ဈေးနှုံန်းများ အဆမတန်ကြီးမြင့်နေသည်ကို ဂရုမစိုက်ပဲ အခွန်တွေ တခုပြီး တခုတိုးမြှင့်ကောက်ခံနေပါသည်။ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံနဲ့ တံတားတွေဆောက်ပါတယ်။ ဆောက်ထားတဲ့ တံတားတွေကို ပြည်သူတွေ အသုံးပြုဖို့ ပိုက်ဆံကောက်ပါတယ်။ ဒါတင်မကပဲ စစ်ဗိုလ်လူတန်းစားကိုသာ အခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးပေးပြီး သူတို့ကသာ မြန်မာ့ဈေးကွက်ကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ချယ်လှယ်နေပါသည်။ ပြည်သူတွေဟာ အနှိမ်ခံဖို့ (၀ါ) သူတို့ကို အခွန်ပေးဖို့ အတွက်ဟု နအဖ ယူဆထားပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ပြည်သူတွေဟာ ဆင်းရဲတွင်းပိုနက်လာပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေအလိုကျ မြန်မာလူမျိုးကို နှိမ့်ချပြီး၊ အနောက်ကို အထင်ကြီးအောင် နည်းပေါင်းစုံ လုပ်နေပါသည်။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးဟာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မှာ ထောက်ပံကြေးဒေါ်လာရနေပါသည်။ ပြည်တွင်း ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် အနောက်ဘက်အစိုးရတွေ အလိုကျလုပ်ဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားပြီး ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ခြင်းကို ဂရုမစိုက်ပါ။
ဒါကြောင့် နအဖကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လေးစားနေတာမှန်ကန်ရဲ့လား၊ မလေးစားတဲ့သူတွေကို အပြစ်တင်မလား? စဉ်းစားပေးကျပါ . . . . . . !
Posted by * In Search of Truth * at 9:42 PM3comments Links to this post